Baarlamaanka Soomaaliya oo la horgayn doono tacadiyada ka dhaca wadad xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo. – The Voice of Northeastern Kenya
Baarlamaanka Soomaaliya oo la horgayn doono tacadiyada ka dhaca wadad xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo.
Xildhibaanada golaha shaabka ee ka soo jeeda degaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan qorshe Baarlamaanka lagu horganayo warbixin ku saabsan tacadiga iyo dhibaatooyinka shacabka ku safra wadada xiriirisa Baydhabo iyo Muqdisho ay la kulmaan.
Xildhibaanadan ayaa sheegay in dhibaatooyin joogta ah ay la kulmaan shacabka ay ku matalaan golaha shacabka Soomaaliya ee ku safra wadooyinka gobolada dalka gaar ahaan deegano ka mid ah gobolka shabeelada dhexe.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa wafdigii guddoomiyaha golaha shacabka ku wehlinaayay safarkii uu ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay ayaa sheegay in kulan gaar ah laga yeelan doono xal u helida xaaladaha ka taagan deegaanada ay cabashooyinku ka soo yeerayaan.
Waxa uu xusay in guddoonka golaha shacabka ay u gudbiyeen cabashooyinka iyo dhibaatooyinka heysta shacabka ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan deegaanada ku teedsan wadada dheer ee xiriirisa gobolada bay iyo Banaadir.
← Ciidamada xasilinta Soomaaliya oo eedaymo loo soo jeediyay.
NATO leaders hope to ‘avert disaster’ amid concern Trump may undermine alliance →